96W « MMWeather Information BLOG
လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B မြောက်-အနောက်မြောက်သို့ ရွေ့လျား
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL, TSR နှင့် JTWC data များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် (INVEST 98B) သည် လမ်းကြောင်းပြောင်းပြီး မြောက်-အနောက်မြောက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း အားကောင်းလာခြင်း မရှိကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
INVEST 98B သည် ကော့သောင်းမြို့ အနောက်ဘက် မိုင် ၆ဝဝ ခန့်၊ ပို့ဘလဲယားမြို့ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၅ဝ ခန့်နှင့် ကိုကိုးကျွန်း လေဆိပ်၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၄ဝဝ ခန့် ပင်လယ်ပြင်တွင် ဆက်လက်ဗဟြိုပုနေပြီး အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဟု ခန့်မှန်းရပါသည်။
98B 14 Nov . . . → Read More: လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 98B မြောက်-အနောက်မြောက်သို့ ရွေ့လျား
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W မုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည်
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96W သည် ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေ HIGH အဆင့်သို့ ရောက်ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၄ ရက် – မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝဝဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် အချက်အလက်များနှင့် ဂြိုလ်တုဓါတ်ပုံများ အရ 96W သည် အနောက်ဘက်သို့ ရွေ့လျားလျက်ရှိနေပြီး ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၁၉၀ ခန့်အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပါသည်။ 96W မှာ ပိုမိုအားကောင်းလာပြီး မုန်တိုင်းငယ်အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိလာနိုင်ကာ အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားပြီး ဗီယက်နန်ကမ်းခြေ တောင်ပိုင်းမှတစ်ဆင့် ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့သို့ ရောက်လာနိုင်ဘွယ်ရှိကြောင်း ခန့်မှန်းထားပါသည်။
96W 14 . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W မုန်တိုင်း ဖြစ်လာတော့မည်
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W
By mmweather.ygn, on November 13th, 2012%
တောင်တရုတ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်လျှက်ရှိသည့် လေဖိအားနည်းဆဲလ် INVEST 96W မှာ ပိုမိုအားကောင်းလာသော်လည်း ၂၄ နာရီအတွင်း မုန်တိုင်း ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြေအဆင့် LOW မှာပင်ရှိနေသေးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
နိုဝင်ဘာလ ၁၃ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၁ဝ၃ဝ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W သည် ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၄၉ဝ ခန့်၊ ဘရူနိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ဒါဆရီဘာဂါဝန်မြို့တော် ၏ မြောက်-အနောက်မြောက်ဘက် ၂၅၅ မိုင်ခန့်တွင် တည်ရှိနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းရပါသည်။
96W – 13 Nov 2012 0000Z Location: 7.1 115.7 Winds: . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ လေဖိအားနည်းဆဲလ် 96W
Leaveacomment Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ PAKHAR အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ အားလျော့သွား
မုန်တိုင်း PAKHAR သည် အပူပိုင်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အားလျော့သွားပြီး မတ်လ ၃၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၂၃၀ နာရီ တွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်း စီးတီး၏ အရှေ့- အရှေ့တောင်ဘက် မိုင် ၂၃၀ ခန့် အကွာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုလျှက်ရှိပြီး လွန်ခဲ့သည့် ၆ နာရီ အတွင်း အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၃ မိုင်နှုန်းဖြင့် ဖြည်းညှင်းစွာ ရွေ့လျားခဲ့ပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR ၏ မုန်တိုင်း ဗဟိုချက်သည် မူလခန့်မှန်းထားသည်ထက် အနည်းငယ်နောက်ကျပြီး ဧပြီလ-၁ ရက် မြန်မာစံတော်ချိန် နံနက် ၆ နာရီခွဲ မှ ညနေ ၆နာရီခွဲအချိန် အတွင်း . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ PAKHAR အပူပိုင်းမုန်တိုင်း အဆင့်သို့ အားလျော့သွား
2 comments Uncategorized တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR(02W) သည် ဗီယက်နန်နိုင်ငံ ဟိုချီမင်းစီးတီး အရှေ့ဘက် ၃၀၅ မိုင်ခန့်၊ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ပြင်တွင် ဗဟိုပြုနေပြီး လွန်ခဲ့သော ၆ နာရီအတွင်း အနောက်ဘက်သို့ တစ်နာရီ ၃ မိုင်နှုန်းကျော်ကျော်ဖြင့် ရွေ့လျားခဲ့ကြောင်း မြန်မာစံတော်ချိန် မတ်လ ၃၀ ရက် နေ့လည် ၁၂၃၀ နာရီတွင် ရရှိသည့် NRL data များအရ သိရပါသည်။
တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR သည် အချင်း မိုင် ၂၄၀ ခန့်ရှိနေပြီး အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ဆက်လက် ရွေ့လျားကာ ဗီယက်နန်ကမ်းခြေအား မူလခန့်မှန်းထားသည့်အတိုင်း Binh Thuan ပြည်နယ်၊ Phan Thiet မြို့ အနီး၊ Nha Trang မြို့ပေါ်မှ မတ်လ ၃၁ ရက် . . . → Read More: တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်း PAKHAR အနောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားလျှက်ရှိ
3 comments Uncategorized တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02W(TWO)
By mmweather.ygn, on March 29th, 2012%
ဂျပန်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာနမှ မြန်မာစံတော်ချိန် မတ်လ ၂၉ ရက် ၁၃၁၅ နာရီ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် 02W အား အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR ဟု အမည်ပေးထားပြီးကြောင်း တွေ့ရပါသည်။
အပူပိုင်းမုန်တိုင်း PAKHAR 02W(TWO) ဂျပန်နိုင်ငံ မိုးလေဝသဌာန ထုတ်ပြန်ချက် TS 1201 (PAKHAR) Issued at 06:45 UTC, 29 March 2012 (မြန်မာစံတော်ချိန် မတ်လ ၂၉ ရက် ၁၃၁၅ နာရီ)
<Analyses at 29/06 UTC> Scale – Intensity – Center position N9°50′(9.8°) E112°00′(112.0°) Direction and speed of . . . → Read More: တောင်တရုတ်ပင်လယ်မှ အပူပိုင်းမုန်တိုင်း 02W(TWO)